Andry Rajoelina : Tokony hijery fitaratra -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Rajoelina : Tokony hijery fitaratra
Andry Rajoelina : Tokony hijery fitaratra
08/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Miakatra any an-doha ve ny aretim-pahefana sa ahoana? Apetraka amin’i Andry Rajoelina izany fanontaniana izany, taorian’ny tafa nataony tamin’ny Jeune Afrique farany teo ka nilazany hoe: “Le drame de ce pays, c’est que les différents présidents qui se sont succédé à sa tête n’étaient pas préparés. Et moi le premier ».
Philibert Tsiranana, Didier Ratsiraka, Zafy Albert, Marc Ravalomanana. Ireo filoham-pirenena ireo teo aloha sy ny filoham-pirenena am-perin’asa Hery Rajaonarimampianina izany no notondroin’i Andry Rajoelina fa fototry ny fahantrana sy ny fahavoazan’ny firenena. Ny tenany hono mba ahoana? Ndrao mba tokony hijery fitaratra mialohan’ny hitenenana ny hafa ity filohan’ny antoko TGV sy MAPAR ity?
Marina tokoa fa vokatry ny fahalovana nolovaina tamin’ireo mpitondra nifandimby no fototr’izao fahantrana lalina mianjady amin’ny vahoaka malagasy izao. Tsy afaka miala amin’izany anefa i Andry Rajoelina mba tsy hilazana fa ny tenany no tena anisan’ny nampitontongana tanteraka ny fiainam-pirenena, vokatr’ireny fanonganam-panjakana ny taona 2009 ireny.
Ny tenany araka ny nambarany tao amin’ny “Jeune Afrique” no olona niomana voalohany indrindra hitondra firenena teto Madagasikara. Na io teny nataony io fotsiny aza dia efa ampy hitsarana ny momba izany Andry Rajoelina izany. Niresaka ny tsy fananan’asa eto Madagasikara ny tenany nandritra io dinika nataony tao amin’ny “Jeune Afrique” dia ny fanontaniana apetraka amin’ity “jeune putschiste” ity ny hoe: “fa iza no nitso-drano ireny andian’olona nandoro sy nandroba magazay sy tranombarotra teto ireny ny taona 2009? Iza no fototry ny fiatoan’ny AGOA izay niteraka fahaverezan’asa an-tapitrisany nandritra ny dimy taona?”.
Nanisy fanamarihana manokana mikasika ny kolikoly sy ny fahavoazana ara-toekaren’ny firenena ihany koa ny tenany nandritra izany. Dia mbola apetraka amin’ity mpanongam-panjakana ity hatrany ny fanontaniana manao hoe: “iza no nanome alalana ireny fanondranana “bois de rose” ireny nandritra ny Tetezamita? Tsy kolikoly ve izany fanondranana harem-pirenena izany? Iza no nibodo ny tranon’ny Bianco teny Ambohibao, endrika fampihorohoroana ity birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly ity?
escort dans « Insécurité publique et disfonctionnements de nos institutions »
Marc Ravalomanana : Vahaolana ho an’ny firenena
Nangorom-potsy ny kianjaben’i Mahamasina ny asabotsy 3 novambra teo tamin’ny faradoky ny fampielezan-kevitry ny kandidà laharana 25 amin’ny bileta tokana, Marc Ravalomanana. Hafaliana sy firavoravoana ary endrika miramirana no nitsenan’ireo olona marobe an’ity kandidà ho ...Tohiny
Fetin’ny krismasy : Ho maina ny andro eto Antananarivo
Ambasady Amerikana : Mitsabaka amin’ny fiarovam-pirenena
FFKM : Tomponandraikitra feno